The Top 10 testosterone ester: nke dị mma maka gị? | AASraw
/blog/gallery/The Top 10 testosterone ester: nke dị mma maka gị?
Ihe na 12 / 18 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
A pụrụ ịkọwa Testosterone esters dị ka ngwongwo testosterone nke nwere carbon chains nke ejikọtara na ya. Ogwe carbon nwere ike ịchịkwa ọnụọgụ nkewa, na okwu dị mfe maka ọgwụgwọ nke ọgwụ na ọbara gị. A na-edozi ọgwụ nke ọgwụ dị na mmiri site n'ịdị arọ nke carbon chain nke ester nwere. Ogologo carbon chain na-asụgharị ogologo oge ester na ogologo oge nke ester, nke na-erughị nkwụsị nke ọgwụ na mmiri. Dị ka ọmụmaatụ, testosterone propionate bụ ester nke atọ carbon chains ccc. Otutu, nke a pụtara na e nwere ụdọ carbon atọ na nke a testosterone ester.
Wokpu bụ testosterone esters?
Ihe omuma nke testosterone a na-agbagwoju anya otutu ndi mmadu, o nweghi ike ichota okwu doro anya na nkowa zuru oke nke otutu ndi okachamara nyere. N'okwu dị mfe, ị ga-ebu ụzọ ghọta ihe onye ester tupu ịkwaga iji jikọta ya na hormone testosterone. Ester bụ mmeghachi omume mmiri nke otu, abụọ ma ọ bụ atọ carbon chains. Ọnụ nke ester bụ n'ezie site na ọnụ ọgụgụ nke carbon chains dị. Ugbu a, ị nwere ike itinye otu tiori ahụ iji ghọta esters nke testosterone. Dị ka akọwapụtara n'elu obere esters nwere ole na ole carbon chains na-edozi mmiri na ọbara.
Ahụ gị nwere ike ịmepụta testosterone bụ nke kachasị na-arụ ọrụ maka ịkwa iko na ịkpụ ahụ. Maka ndị nwere obere ụbụrụ testosterone n'ihi ọrịa dị iche iche, nwere ike ịga maka ọgwụgwọ testosterone. N'ebe a, dọkịta nwere ike ịdọ akaebe ọtụtụ ọgwụ protosterone ester nke na-emesị ha ga - ejikọta ọbara gị na inye ihe ndị dị otú ahụ na ndị mmadụ. Ka ị na-eto, nrụpụta testosterone na-agbada. Ụdị hormone na-adịkarị elu n'oge ịghọ okenye na oge uto.
Mgbe ọ dị afọ 35 na karịa ụbụrụ nke testosterone na ahụmalite ịmalite ịdata ọ bụ ezie na ọrịa dịka hypogonadism nwere ike ime ya. Mmetụta mmetụta nke testosterone esters na-adịgasị iche site n'otu ụdị gaa na nke ọzọ, ma ọtụtụ na-ekerekwa otu mmetụta ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ịba ahụ ebe ogwu ahụ bụ ihe nkịtị mgbe ị na-eji ọgwụ ndị a na-agba ọgwụ ma ọ bụrụ na mmetụta ndị ọzọ na-agụnye isi ọwụwa, ehighi ura ma mgbe ụfọdụ ọ na-agbatị ogologo oge.
Gịnị mere anyị ji achọ testosterone?
Testosterone bụ ndị a na-akpọkarị nwoke na nwanyi. Ihe ọtụtụ ndị na-amaghị bụ na ma ndị ikom ma ndị nwanyị na-ebute hormone ahụ. Testosterone bụ hormone na-emepụta àgwà mmadụ na ahụ gị. A na-emepụta ya n'otu ebe na ahụ gị ma gaa n'akụkụ ndị ọzọ site na ọbara. A na-eme hormone ahụ na mpaghara ndị a;
Ule na ụmụ nwoke
Maka ụmụ nwanyị ya mepụtara na ovaries
N'okpuru akwara ndị dị n'elu akụrụ gị dị na ma ndị nwoke ma ndị nwanyị.
Ụdị testosterone dị elu karịa ụmụ nwoke. Ịgaghị edebanye aha ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere ike iduga na nsogbu ndị nwere ike ịbawanye njọ ma ọ bụrụ na nsogbu adịghị emeso ya.
Akwụkwọ Testosterone esters
50-100mg kwa ụbọchị
Mmetụta dị mma Ike ka mma
Testosterone cypionate na testosterone enanthate
58-20-8 cypionate nke Testosterone
Nkezi oge 250-750 kwa izu
Ọkara ndụ 2-3 izu
mmiri njigide Ee
Action Ihe na-egbu oge
Mmetụta dị mma Ike kawanye
mmetụta Nri ntutu, ihe otutu, njigide mmiri na atrophy testicular.
nchedo Otu nyocha nke Nolvadex na gburugburu ebe obibi kwa ụbọchị
mgbake 1 taabụ maka ụbọchị 20
Nkọwaputa 5721-91-5 na-egosi na ọ bụ Testosterone
Nkezi oge 50-100mgs kwa ụbọchị
Ọkara ndụ Ọnwụ, 3-4 izu
Oge 2 a na-agbasoghị
mmiri njigide Obere
Mmetụta dị mma Mmiri dị mma, ahụ ike na ike nweta.
mmetụta Nri ntutu, gynecomastia, acne na testicular atrophy
nchedo 1 taabụ nke Nolvadex na Proviron n'oge niile
mgbake Nwanye -1 taabụ kwa ụbọchị maka ụbọchị 20 mgbe ụbọchị ikpeazụ nke ọgwụgwọ ahụ gasịrị.
HCG 2500-5000IU kwa izu, 20days mgbe ụbọchị ikpeazụ nke usoro ịgba ọgwụgwọ gị.
Ọkara ndụ Ogologo oge
Nkezi oge 1000mg / 14 izu
Action Ogologo oge
Mmetụta dị mma Ọ dị mma ka ị gbakee, ka mma gbasaa, ikewanye ike, na ike ike
mmetụta Akụrụ, ntutu isi, nyocha atrophy na gynecomastia.
nchedo 1 taabụ nke gburugburu na Nolvadex kwa ụbọchị na usoro ọgwụgwọ
mgbake Uwe - otu mbadamba kwa ụbọchị maka ụbọchị 20 mgbe usoro ọgwụgwọ gasịrị.
Nkezi oge 250mg / kwa izu
Ọkara ndụ 1-3 izu
Action Ngwa ngwa ngwa
Mmetụta dị mma Ọ dị mma ịmaliteghachi, ike na ngwongwo muscle, ume dị mma, na vascularization ka mma.
mmetụta Akpa ntutu, ihe otutu, gynecomastia na testicular atrophy.
nchedo Proviron na Nolvadex - 1 taabụ / ụbọchị n'oge usoro ọgwụgwọ gị
Na-eji 1 tab kwa ụbọchị maka ụbọchị 20 mgbe okirikiri
HCG- were ụdị ọ bụla sitere na 2500-5000 IU kwa izu maka ụbọchị 20 mgbe ị gachara.
Kedu ihe kachasị elu 10 testosterone esters?
Ihe ngwọta maka testosterone na-enweghị nsogbu bụ ịchọ enyemaka ahụ n'ụlọ ọgwụ gị kacha nso. Ihe ndị estto testosterone bụ ọgwụ ndị a na-eji eme ihe maka ịgwọ testosterone dị ala na maka ụlọ ịkpụ ahụ. E nwere ọtụtụ tesresterone esters dị na ahịa, Otú ọ dị, ọ bụghị nanị ịzụta ha na mpempe akwụkwọ ahụ, nweta ndenye ọgwụ ziri ezi n'aka dọkịta gị. Ndị na-eme egwuregwu na ndị bodybuilders na-achọkarị ịzụ ahụ ike ha. Ụfọdụ n'ime ndị esters testosterone bụ ndị dị otú a;
1. testosterone Azọpụta
Testosterone Acetate bụ otu n'ime esters testosterone mbụ ka a ga-ebute na ngalaba ahụike. Edere ya maka oge mbụ na 1936. Testosterone acetate bụ ọgwụ na-eme ngwa ngwa nke na-abịa n'ụdị hormone nwoke testosterone. Ọ na-agba ngwa ngwa n'ọbara gị nke na-eme ka ọ dị mma maka ọtụtụ ndị ọrịa ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu. N'elu ngwa, acetate ester na-amalite ịrụ ọrụ n'oge na-adịghị anya na ụbụrụ testosterone ndị ọzọ nwere ike iwe oge ụfọdụ. N'ihi obere testosterone esters ọkara ndụ, ọ ga-adị mkpa ka ị belata dosages mgbe ọ bụla 2 gaa na 3 ụbọchị iji nọgide na-enwe ọkwa testosterone nke bụ isi na-agbanwe agbanwe.
Ịgba ogwu acetate nke Testosterone nwere ike ịbụ ihe na-egbu mgbu, ọ pụkwara iduga n'ọzịza ma ọ bụ nkasi obi n'akụkụ ebe a. Ndị ọrụ ọhụrụ ga-enweta ụfọdụ ihe mgbu ruo oge ụfọdụ, mana ọ bụrụ na ahụrụ gị ahụ, ị ​​ga-adị mma. Otú ọ dị, ọ bụrụ na mmetụta ahụ na-aga n'ihu, gwa dọkịta gị ka ọ nye gị nhọrọ ndị ọzọ.
testosterone Azọpụta usoro ogwu
Testosterone acetate usoro onunu ogwu adabere na ndenye ọgwụ gị dọkịta mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Otú ọ dị, usoro nhazi sitere na 100mg, 200mg, 500mg, na 1000mg mana Cheta na naanị usoro ọgwụgwọ ziri ezi ga-ewepụta ihe ndị chọrọ. Usoro dọkịta kwesịrị ịkewa ya, ma kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị mgbe nyochachara ahụike. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-achọ obere doses mgbe ndị ọzọ na-amụba na dosages ga-ezu. Ejila ọgwụ dọkịta gị zụta ọgwụ ọ bụ na ọ nwere ike iduga mmetụta dị njọ nke testosterone acetate. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu, ị nwere ike ịga maka nrụrụ nke acetate nke testosterone nke ga - enyere gị aka ịkwalite ahụ ike gị na ogo ahụ.
Testosterone Acetate Na-arụ ọrụ n'ahụ
Na CAS O: 1045-69-8, testosterone acetate bụ otu n'ime ndị na-eme steroid kasị mma n'ahịa ugbu a nke meriri obi nke ọtụtụ ndị ọkachamara bodybuilders. Ọgwụ na-amalite ịrụ ọrụ obere oge mgbe ị gụsịrị ọgwụ. Ọ na - akpata mmepụta nke hormones testosterone n'ime ahụ gị nke na - enyere ọtụtụ anụ ahụ aka itolite, tinyere akwara gị ma na - agba abụba dị ka mma. Dị ka onye na-arụ ọrụ n'ahụ, a ga-achọkwa gị iji usoro ọgwụgwọ na-eri nri kwesịrị ekwesị maka gị iji nweta ihe ndị chọrọ. Ngwá ọgwụ dị n'ụdị dị iche iche na nke a na-atụgharị uche. Ya mere, ọ dịịrị gị, ịhọrọ ụdị nke kacha mma maka gị. Otú ọ dị, dọkịta gị ga-abụ onye kachasị mma iji nyere gị aka ime mkpebi ziri ezi mgbe ị nyochachara ahụike.
Testosterone Acetate Ọkara ndụ na okirikiri
Ihe acetate testosterone bụ otu n'ime ọgwụ ọjọọ kachasị njọ nke 2 ruo ụbọchị 3 na usoro ọgwụgwọ nke karịrị izu 12. Dọkịta ahụ ga - eji usoro kachasị mma na testosterone acetate okirikiri dabere na ọnọdụ ahụike gị na mkpa gị. E nwekwara nhọrọ nke usoro ọgwụgwọ kwa ụbọchị na nke izu ụka, gwa dọkịta gị ihe dị gị mma, na s / ọ ga-enyere gị aka. I nwekwara ike iji ọgwụ ahụ na-eme ihe ndị ọzọ dị ka Proviron iji belata mmetụta nke mmetụta dị n'akụkụ.
Testosterone Acetate uru
Ụfọdụ n'ime uru ndị kachasị acetate testosterone bụ na;
Ọ na-eme ka uru ahụ dịkwuo mma
Emezi ahụ ike ma gbakee anụ ahụ
Meziwanye ọrụ ahụ dum
Nke a bụ ọgwụ nkwụnye onwe onye nke ị nwere ike ịbanye n'ime ahụ gị mgbe egosiri gị ka onye dọkịta mee ya. Testosterone cypionate maka ire ere na-abịa n'okpuru aha aha Depo-Testosterone, ị nwere ike ịchọta ya na ntanetị dị iche iche n'ịntanetị ma ọ bụ site na ụlọ ahịa ọgwụ gị. N'ọtụtụ ọnọdụ, gọọmentị na-achịkwa ọgwụ ahụ n'ihi ike ya na mmetụta ndị ọ nwere ike ịkpata ma ọ bụrụ na ejighị ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Testosterone cypionate nke nwere nọmba CAS 58-20-8, bụ nke e mepụtara na njedebe 1940s ma e gosipụtara ya maka iji ọgwụ na 1951. Ewezuga iji ọgwụ na-eme ihe, ọgwụ na-eje ozi dị ka nnukwu mgbakwunye maka ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu. Ọ na-akpali mmepụta nke hormones testosterone n'ime ahụ nke dị mkpa iji melite ma na-eme ka enwekwu ahụ ike na-eme ka ahụ dịkwuo ike. Dabere na mkpa gị, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe ọ dịkarịa ala otu ugboro na 1 ruo 4 izu. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya na ị na-aga maka nyocha ahụike ịmara ọgwụ kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ gị ma ọ bụ mkpa gị.
testosterone Cypionate usoro ihe omume
Ihe na-emeputa ihe na-akpata Testosterone cypionate dị ka ọgwụ ndị ọzọ niile nke na-eto eto na androgen. Ndị na-agwọ ọrịa n'ime ìgwè ọgwụ a na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ma na-emeso otu ọnọdụ ahụ. Testosterone cypionate dị mma maka ọgwụgwọ hypogonadism n'ime ụmụ mmadụ ebe ọ na-anọchi testosterone na ahụ gị adịghị enwe ike ịmepụta. Dika dọkịta gị nwere ike ịdọ aka ná ntị na-ahụ maka ọgwụ cypionate testosterone mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị ọzọ na-emekarị ị ga-enweta mgbe ị gụchara ọgwụ a bụ ihe mgbu ma ọ bụ ọzịza gburugburu ebe ogwu ahụ, mmepụta ogologo oge, na isi ọwụwa n'etiti ndị ọzọ.
The testosterone cypionate ahịa dịgasị iche site na onye na-ere ahịa gaa na onye ọzọ, ya mere mee nnyocha gị na mbụ iji nweta onye a ma ama na onye a tụkwasịrị obi bụ onye nwere ike ịnye ọgwụ ndị ọgwụ na ọnụahịa bara uru. Dika dọkịta gị nwekwara ike ịrụ ọrụ dị mkpa n'inyere gị aka ịnweta ọgwụ ziri ezi nke testosterone cypionate na ọnụọgụ ego. Ịṅụ ọgwụ ọgwụ ọjọọ nwere ike ịkpata nsogbu ndị siri ike, ya mere, jide n'aka na ị na-agbaso ndụmọdụ dọkịta gị.
testosterone Cypionate Ọnụọgụ ọgwụ
Nke a bụ ọgwụ injectable na usoro ọgwụ cypionate testosterone nke 200 na 800mgs kwa izu. Dika dọkịta gị ga-ekwu na ọ bụ ya kwesịrị ekwesị na-adabere na ọkwa gị na ihe ịchọrọ imezu site na njedebe nke oge ahụ. A ghaghị inye gị ọgwụ ahụ site n'ikike aka gị elu ma ọ bụ nkwụsị gị. Dọkịta gị nwere ike ịnye otu izu ma ọ bụ nke ọ bụla, ma ọ bụ ị nwekwara ike ịga maka usoro ọgwụgwọ kwa ọnwa.
testosterone Cypionate Ọkara ndụ
Testosterone cypionate steroid nwere ndụ ndụ ruo ụbọchị 8 ma dị n'etiti otu n'ime ihe mgbakwunye ndị ọkachamara jiri ọrụ bodybuilders mee. A ghaghị iji ọgwụ cypionate testosterone mee ihe n'oge oge nke 7 ụbọchị maka nsonaazụ kacha mma.
testosterone Cypionate Na-arụ ọrụ n'ahụ
Ngwurugwu bu ngwugwu magburu onwe ya maka ndi mmadu na ndi n'egwuregwu. Testosterone cypionate na-enye ahụ gị ike zuru ezu maka mgbatị nke na-enyere gị aka ịmepụta ahụ ike na ozu ahụ ị chọrọ. N'ileghachi anya na nsonaazụ nke ndị ọrụ mbụ nke ọgwụ a rụpụtara mgbe a rụsịrị ya, ị nwere ike ijide n'aka na nke a bụ ọgwụ na-enye ohere ịnweta ọrụ gị. Otú ọ dị, ka ị nwee ike izute ihe mgbaru ọsọ gị, ị ga-eso ọgwụ ahụ na-eri nri na mmemme kwesịrị ekwesị.
testosterone Cypionate uru
Ọtụtụ bodybuilders ọkachamara dịka steroid a n'ihi na ọ na-enye nsonaazụ ọma na ogologo oge. Ị nwere ike ịhọrọ ị ga-aga maka ọ bụla kwa ọnwa karịsịa ma ọ bụrụ na ị naghị enwe obi ụtọ na injections kwa izu. Ndị ọzọ testosterone cypionate uru gụnyere;
Nyere aka n'igide akwara
Na-enyere aka ịzụlite ahụ ike
Gwa ihe ngwọta na-adị ogologo oge
Mee ka ike na ike dịkwuo.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe mgbakwunye nke ga-enyere gị aka ịzụlite ahụ ike gị, nye gị ike dịka ịkụ anụ abụba gị mgbe ahụ testosterone decanoate bụ ngwaahịa dị mma maka gị. Otú ọ dị, ọ dị gị mkpa ịghọta na testosterone na-abịa n'ụdị dị iche iche na ụdị ị họọrọ nwere ike inwe mmetụta dị oke n 'ọganihu gị na ihe mgbaru ọsọ gị. Ọtụtụ bodybuilders na-eji AKWỤKWỌ NDỊ NA-ECHIOKWU ỤBỌCHỊ ime ka etrogen nabatara ahụ. Ọgwụ ahụ na-enyekwa uru dị iche iche dịka inye aka ịmalite ịmalite inwe mmekọahụ maka ndị ikom nwere nkwarụ erectile. Maka ọganihu na nkwonkwo ahụ, ọgwụ a na - eme anwansi ma ọ bụrụ na ị na - agbaso usoro ọgwụgwọ na nri kwesịrị ekwesị.
Testosterone decanoate nwetara mgbasa ozi ya n'ihi ihe ọma ọ na-enye ndị ọrụ. Ná mmalite, a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe iji dozie nsogbu testosterone dị ala na ụmụ nwoke, tupu a mata na ọ nwere ike inyere ndị ahụ na-arụ ọrụ aka aka iru ihe mgbaru ọsọ ha. Eziokwu ahụ bụ na ọ bụ nanị otu ugboro n'izu ka a ga-etinye ọgwụ ọgwụ ahụ iji mee ka ọ bụrụ ọkacha mmasị maka ọtụtụ ndị na-ahụ maka ahụike nke na-adịghị amasị ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa ọnụ. Testosterone decanoate bụkwa ọgwụ magburu onwe ya nke na enyere aka n'ịba ụba ọbara ọbara n'ime ahụ. Ruo ọtụtụ afọ ugbu a kemgbe mmalite nke ọgwụ a, ọ na-egosi na ọ bụ ihe ngwọta kachasị maka ọtụtụ mmetụta nke testosterone dị ala ma ma ndị nwoke ma ndị nwanyị.
Wokpu bụ Testosterone decanoate?
Ntucha bu onye ester, dika achoputara na mbu n'isiokwu a, onye ester bu ihe ndi ozo nke na enyere aka na pharmacokinetics nke ihe obula. N'okwu dị mfe, ọ na-enyere aka n'iwe ọgwụ site n'ahụ gị ma nwee mmetụta dị ịrịba ama na otu o si emeso ahụ gị. Ester kpebiri ọkara ndụ nke ọgwụ ọ bụla na ogologo oge ọ ga-adị n'ime usoro ahụ gị. Testosterone decanoate bodybuilding nwere ọkara ndụ nke 7 ụbọchị, nke pụtara na ị ga-achọ ịgbanye ọgwụ ozugbo n'otu izu. Nke ahụ na-egosi na testosterone na-eme ka ihe dị ka deca bụ ọgwụ dị mma nye ndị nwere nsogbu na ịkwagide ahụ ike.
Testosterone Decanoate Half ndụ
Mgbe ị gụsịrị ọgwụ ahụ, ọ na-arụsi ọrụ ike n'ahụ gị maka 7 gaa na 10 ụbọchị. Ya mere, a ghaghị iwere ọgwụ dịkarịa ala otu ugboro n'izu. Soro usoro ntuziaka nke dọkịta ka ị nweta nsonaazụ dị mma na iji mezuo ihe mgbaru ọsọ gị.
Testosterone Decanoate Ọnụọgụ ọgwụ
Maka ebumnuche nke ahụ na-atụ aro na testosterone dị na 250mgs na 1000mgs kwa izu. Maka ndị na-amalite 250-500gms n'izu ọ bụla ga-adị mma, mana enwee ike ịba ụba na usoro ọzọ. Nri na mgbatị kwesịrị ekwesị ga-adị mma iji nweta nsonaazụ na uru dị oke.
Testosterone decanoate uru
Ihe kachasị uru ị ga-enweta site na iji ọgwụ ọjọọ a gụnyere gụnyere;
Na-enye aka n'ụzọ dị ukwuu n'inwe ọganihu ahụ
Emezi ma na-akwado ahụ ike
Mee ka ike ma obu ikike zuru oke.
N'aka nke ọzọ, testosterone declinate vs. cypionate nwere ike na-arụ ọrụ otu ma na-enye otu ihe ahụ, ma ọdịiche na-abịa na ọkara ndụ. Na testosterone decanoate, nanị ị ga-achọ ịgbanye otu dose kwa izu ka ị na-eji cypionate ịgbanye onwe gị ma ọ dịkarịa ala otu n'ime ụbọchị abụọ ma ọ bụ atọ. Ihe dị mkpa na ọgwụ a bụ na ọ nwere ike ịkwụsị mmepụta nke testosterone n'ime ahụ gị nke pụtara na ahụ gị agaghị enwe ike ịzụlite ahụ ike dị mkpa mgbe ị gwụchara ọgwụ ọgwụ. Na-adabere na ahụ ike gị, ị nwere ike ịnweta mmetụta dị iche iche nke nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ ma ọ bụrụ na ịnweghị iji ọgwụ kwesịrị ekwesị. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnweta sweating, ehighị ụra ma ọ bụ acne mgbe ụfọdụ. Nọgide na-agbaso ntụziaka dọkịta gị ma ọ bụrụ na nsogbu ọ bụla nwere ike ịgwa ya.
Nke a bụ ọgwụ na-edozi ahụ bụ nke dị mma maka ịgwọ ọnọdụ nke testosterone dị ala dịka enweghị ike ịmepụta ahụ ike, adịghị ike ma ọ bụ oge na-egbu oge na ụkọ ihe mgbochi ọzọ. Onye dọkịta kwesịrị ịdọ aka ná ntị testosterone enanthate ebe ọ bụ na iji ya eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi pụrụ ịkpata mmetụta ndị na-enweghị ike ime.
Entohate testosterone bụ otu n'ime ọgwụ ndị ana-akasị ike anabolic kemgbe a tọhapụrụ ya na ahịa na 1930s. Ka ọ dị ugbu a, ọgwụ ahụ na-aga n'ihu n'etiti steroid kachasị amasị ndị ọkachamara na ndị na-eme egwuregwu. Na mbido, onye steroid adịghị etinye aka na ester ọ bụla nke mere ka ọgwụ ahụ banye n'ọbara ozugbo. Na 1937, onye ọrụ ahụ malitere ijikọta ọgwụ na ọgwụ ndị ester nke gbanwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile na steroid a. N'afọ 1950, onye na-eme ọgwụ ọjọọ kpebiri ịgụnye enanthate ester compound na ọgwụ na-enye ya ume nke ọtụtụ ndị na-anụ ahụ na-anụ ụtọ taa.
Na-arụ ọrụ n'ahụ
Testosterone enanthate 250 bụ ụdị ọgwụ na-ahụkarị nke ị ga-ahụ na ahịa. Otú ọ dị, dọkịta gị nwere ike ịhazi ya mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Maka ndị na-eme egwuregwu, ọgwụ ọgwụ a na-enye ọgwụ agaghị enyere gị aka melite arụmọrụ gị, ma ọ ga-enyere gị aka imezu ihe ị chọrọ. Testosterone enanthate bodybuilding enyere aka ịmepụta ahụ gị ma dozie abụba ahụ gị. Ka ị na-aga n'ihu na mmega ahụ ị na-eme mgbe niile, ị ga-enweta ahụ ike na ahụ ị chọrọ. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta nsonaazụ nke dị obere, kpọtụrụ dọkịta gị maka enyemaka.
Testosterone enanthate maka ire ere dị na ụdị ọgwụ dị iche iche, na ụlọ ahịa na ntanetị, Otú ọ dị, ịzụta ọgwụ n'okpuru ndụmọdụ ọkachamara ahụ ike gị. Mmetụta ọgwụ ọjọọ dị ize ndụ ma ọ bụrụ na ịchichaghachị ma ọ bụ jiri ya eme ihe na-ezighị ezi ma ọ nweghị mgbe a ga-agbanwe. Iji nọrọ n'akụkụ nchedo, dọkịta gị ga-edepụtara gị ọgwụ kwesịrị ekwesị maka gị. Mgbe testosterone enanthate okirikiri ị ga-enwe ike ịhụ nsonaazụ, ma ọ bụrụ na ị hụghị ihe ọ bụla, gwa dọkịta gị.
testosterone Enanthate Ọnụọgụ ọgwụ
Ọtụtụ ndị dọkịta na-ahọrọ ụbụrụ nke onye ọ bụla na-egosi na ọ bụ ọgwụgwọ ọ bụla ọ bụ ezie na ọgwụ ahụ na-abịa dị iche iche. Dị ka ọmụmaatụ, a na-ekesa ọgwụ ndị ọgwụ dịka ihe mgbaru ọsọ ịchọrọ ịchọta karị ma ọ bụrụ na ị bụ onye na - arụ ọrụ - ụdị usoro ọgwụgwọ nke ọgwụ ọjọọ sitere na 250mg kwa ụbọchị na 750mgs kwa izu. N'ọnọdụ ụfọdụ, ndị bodybuilders na-ewere ihe dị elu ruo 1000mgs kwa izu. A na-ekpebikwa usoro ọgwụgwọ ahụ site na ogo gị, n'ihi na a na-atụ aro obere obere dosesị nke nwere ike ịba ụba mgbe e mesịrị.
Testosterone Enanthate Half ndụ
The Testosterone enanthate nwere oge ndụ ọkara nke 10.5 ụbọchị, ma ị kwesịrị ịnweta ọgwụ ahụ maka ọgwụ gị mgbe 10 gasịrị. Otú ọ dị, dọkịta gị nwere ike ịmepụta ọgwụ kwesịrị ekwesị kwa izu nke ga-enyere gị aka inweta ume ma wuo ahụ ike.
testosterone Enanthate Nsochi
Testosterone enanthate nwere usoro dịgasị iche iche dabere na ọkwa gị, dọkịta gị ga-enwekwa ọnọdụ zuru oke iji chepụta nke kacha mma maka gị. Dịka ọmụmaatụ, mmalite nke testosterone enanthate na-agụnye iji mpempe akwụkwọ na akara ndị ọzọ dịka Arimidex na Deca-Durabolin. Mgbanwe ihu n'ọdịnihu nke bụ usoro nke abụọ, a na-amụba dosesị mgbe ị na-ejikarị azụ gị amalite. A na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'ebe a na Dianabol 40mgs kwa ụbọchị maka usoro dum. Oke mgbagwoju anya bu uzo elu nke di nma maka ndi Testosterone enanthate nwere ahuhu, ma ebe a di oke elu.
Testosterone enanthate uru
Ọgwụ a ejirila rụọ ọrụ dị mkpa n'ịkwalite ọrụ nke ndị na-arụ ọrụ na ndị na-eme egwuregwu. Mgbe anare ya n'ụzọ ziri ezi, ọgwụ ahụ nwere ike ịnapụta nsogbu dị iche iche, testosterone enanthate uru nke gụnyere;
Dịbawanye ma nwekwuo uto nke uru
Mee ka mgbake anụ ahụ dị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mberede ma ọ bụ na-agbatị mgbe ị na-arụ ọrụ.
Mee ka ike na ike zuru ike nke na-enyere ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu aka nweta ihe mgbaru ọsọ ha.
Ọkpụkpụ anụ ọkụ na-enyere ndị na-ahụ maka ozu aka iru ọdịdị ahụ ha chọrọ.
Testosterone phenylpropionate (BAN) (akara aha Testolent), ma ọ bụ testosterone phenylpropionate, nke a na-akpọ testosterone hydrocinnamate, bụ ụbụrụ anabolic-androgenic arụmọrụ (AASraw) na ester etrogen - n'ụzọ doro anya, C17β phenylpropionate ester nke testosterone - nke a na-akwalite n'oge gara aga na Romania. Ebu ụzọ webata ya na nyocha sayensị na 1955 ma bụrụ otu ihe nke ahịa ahịa AAS ole na ole, ma a dịghị eji ya eme ihe n'ozuzu ya. Testosterone phenylpropionate bụ otu akụkụ nke Sustanon na Omnadren.
A na-ebufe mbụ na-emepụta Tesysterone phenylpropionate n'ahịa na 1955 site na Sicomed Pharmaceutical house ma na-ere n'okpuru aha aha Testolent. Ọ dịbeghị ọgwụ ahụ ọbụna n'ọhịa ojii mgbe a tọhapụrụ ya. Otú ọ dị, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya ọ dịlarị, ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu nabatara ya nke ọma. Ọgwụ ahụ abụwo akụkụ nke testosterone ndị ọzọ dị ka Omnadren.
Testosterone phenylpropionate bụ ọgwụ etinye n'ime ọgwụ ndị androgens. Testosterone phenylpropionate bụ ọgwụ e kwesịrị inye site na ogwu. Mgbe ịṅụ ọgwụ ahụ, ọgwụ ahụ nọgidere na-arụsi ọrụ ike maka ihe dị ka ụbọchị ise mgbe ahụ i nwere ike iji ọgwụ ọzọ. A na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'adabereghị ma ọ bụ na-eji ọgwụ ndị ọzọ testosterone maka ọgwụgwọ testosterone na onye ọrịa na-egosi na insufficiency testosterone. N'aka nke ọzọ, ọgwụ ọjọọ a na-ewu ewu dị mma iji melite ike anụ ahụ na ume ike.
Aghaahia mara mma nke ndi oru kwesiri iche banyere ihe a bu na mmeghachi omume n 'imeghari mmiri dika odi ka oge. Tụkwasị na nke a, site na iji proysteroprene na-emepụta testosterone, ndị na-ahụ maka ozu na-akọ na enwekwu agụụ, ike, na àgwà. N'ihe nile site n'itinye ụdị nke testosterone n'ụzọ ziri ezi, mmetụta ahụ dị ka nke ndị ọzọ testosterone esters ma ọ dịghị achọ nleta nleta dị ukwuu, ma ọ bụ mee ka mmiri rụọ ọrụ.
Uru Tesysterone phenylpropionate
Onye na-ahụ maka steroid a na-emepụta ihe na-emepụta ihe n'etiti ndị bodybuilders n'ihi mmetụta ọma ya na ahụ. Ụfọdụ n'ime ndị a mara testosterone phenylpropionate uru gụnyere;
Ịzụlite ụlọ muscle site n'ime ka ikike nkwụsị nitrogen dị.
Na-eme ka ahụ ike zuru ike, si otú ahụ na-enyere ndị na-eme egwuregwu aka ịrụ ọrụ ruo ogologo oge ma nweta ihe ndị chọrọ. Ọ na-eme ka arụ ọrụ nke onye na-eme egwuregwu na onye na-eme egwuregwu na-arụ ọrụ.
Mmetụta nke mmepụta ọbara ọbara ọbara na ahụ.
Mbelata ma merụọ abụba anụ ahụ.
Testosterone Phenylpropionate Half ndụ
Testosterone phenylpropionate bụ ọgwụ injectable na ọkara ndụ 3 ruo ụbọchị 4. A ga-achọrọ gị iji ọgwụ gị mee otu ugboro na ụbọchị 4. Onye ọrụ ahụike ọkachamara kwesịrị inye ọgwụ ahụ.
Testosterone phenylpropionate usoro onunu ogwu
Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu na-eji ọgwụ a eme ihe ugboro abụọ n'izu ma ọ bụ mgbe ọ bụla ụbọchị abụọ gasịrị. Ihe ziri ezi testosterone phenylpropionate usoro onunu ogwu nhazi site na 300Gm ruo 3000mg kwa izu. Otú ọ dị, mmetụta mmetụta nke phenylpropionate testosterone bụ ihe na-adịghị njọ ma e jiri ya tụnyere nke ndị steroid ndị ọzọ.
testosterone Phenylpropionate Nsochi
A na-ejikọta steroid phenylpropionate nke testosterone na esters ndị ọzọ dị mkpirikpi maka obere oge nke 10. Mkpụrụ ndụ nke phenylpropionate testosterone dị mma kwesịrị ịgụnye ule ule nke nwere nhazi nke 300mg kwa izu na NPP kpochapụla na ntinye aro nke 300mg kwa izu kwa. Usoro mkpirikpi kwesịrị ịdị n'okpuru izu iri maka bodybuilders.
Isocaproate bụ onye ester na-ejikọta ya na steroid anabolic. Ọ bụ onye ester nke nwere ike jikọta ya na ndị steroid dịka Cypionate a ma ama Enanthate esters. Dị ka Cypionate na Enanthate, a pụkwara itinye ihe ndị ọzọ na hormone testosterone, ma ọ bụ n'ihi Isocaproate, nke a ga-abụ isi ebe anyị na-ahụ na ọ na-esonyere ya. Testosterone-Isocaproate, ụdịdị monoester nke na-adịghị anụ ahụ; na ohere ịchọtara ya, ọ bụ karịa ka ọ ga - abụrịrị na azọrọ na a maara aha gị, ọ dịghịkwa mkpa ọ bụla ị nwere Testosterone Isocaproate dị ka otu ester. Ebee ka anyị ga-esi nweta ihe ndị kachasị mma na-emekarị na ebe ọ na-arụ ọrụ dị elu bụ na mixto testosterone; Omnadren n'ụzọ doro anya na Sustanon 250. Omnadren na Sustanon-250 bụ ogige testosterone nke nwere mmiri anọ dị; ihe dị iche iche dị iche iche dị iche iche dị iche iche na-eme ka otu ngwongwo testosterone gwakọtara.
The testosterone Isocaproate bụ onye ester, ọ dịkwa naanị mgbe a na-etinye ya na steroid dị ka Omnadren na Sustanon 250. A pụrụ ịkọ akụkọ akụkọ nke ester ahụ na 1970 mgbe a tọhapụrụ Sustanon 250 n'ahịa. Ọrụ nke Isocaproate ester bụ iji mee ka ọgwụ kwụsị ogologo oge n'ahụ gị ma kwe ka ndị ọzọ steroid nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma. Isocaproate ester na-enye steroid na ọkara ndụ site na 7-9 ụbọchị.
Testosterone Isocaproate Ọnụọgụ ọgwụ
Ebe ọ bụ na Isocaproate adịghị aka, testosterone isocaproate dosing varies depending on where it has been incorporated. Dịka ọmụmaatụ, na Sustanon 250 gụnyere onye na-eri nri bụ 60mgs na usoro Sustanon 250 si na 250mgs gaa 1500mgms kwa izu. Dọkịta gị ga-edepụta usoro kachasị mma maka na ị dabere na mkpa gị.
Testosterone Isocaproate Ọkara ndụ
Testosterone Isocaproate nwere ndụ ọkara ọkara nke ruo na 7-9 ụbọchị nke pụtara usoro ọgwụ nke steroid ọ bụla nwere mmasị na ester a kwesịrị iwe otu ugboro kwa izu. Ọbụna ma ọ bụrụ na ị mezue okirikiri gị taa, ị ga-anọgide na-enwe mmetụta ọgwụ ọjọọ maka ụbọchị ole na ole na-esote.
testosterone Isocaproate Bekwesiri
Testosterone Isocaproate uru nwere ike ịdabere na ngwakọta dịka Omnadren na Sustanon 250 ma nwee ike kewapụ ya abụọ; ike ndị dị na n'elu na ihe ụdị onyinye a na-enye dị ka nke dị iche na otu ụdị ester. Dị ka a nyochachara na mmalite oge, ike nke ngwakọta testosterone bụ iji mee ka mbara igwe abụọ dị elu, nke a dị ntakịrị ma dị egwu, nke a na-ejikwa ngwa ngwa mee testosterone nwere mmetụta dị ogologo oge. Nke ahụ nwere ike ịdị ka ọ dị ntakịrị mfe, mana eziokwu nke okwu a bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla ọzọ karịa ya. N'oge ahụ, anyị nwere uru ụfọdụ dabere na àgwà ndị ahụ dị n'elu, ma dịka Omnadren na Sustanon 250 na-ejikarị eji ya eme ihe, anyị na-eche naanị uru na ìhè ahụ.
Maka onye na-eme egwuregwu, onye ọ bụla na-atụ anya ịnweta oke nkwekọ na àgwà, Isocaproate shapes bụ mkpebi dị mma n'ihi na ha ga-aga n'ihu n'akụkụ abụọ ahụ. Ọzọkwa, site na agbatịpụtara ebe obibi metabolic, ị dị njikere inweta nkwekọ kwesịrị ekwesị na obere ahụ ike na nchịkọta ruru eru, nke ahụ dịkwa oke ọnụ. Enwere ike iji ihe ndi ozo dika ihe ndi ozo; echebara ihe niile echiche, mma mgbaze na-egosi na ịbawanye ike na-ere ọkụ, na dịka testosterone bụ nnukwu anụ ahụ dị ọcha na-echekwa na ọ bụ mkpebi dị oke mma maka ndokwa ọ bụla.
Nke a bụ nke kachasị testosterone ester nke na-agba ngwa ngwa n'ọbara. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ ngwa ngwa, mgbe ahụ testosterone propionate ga-abụ nhọrọ ziri ezi maka gị. Otú ọ dị, ọgwụ ahụ nwere ọkara ndụ otu ụbọchị. Ya mere, ị ga-etinye ọgwụ ahụ kwa ụbọchị ruo mgbe okirikiri ahụ gachara. Testosterone propionate price ranges from one selling to another and the dosage you choose. Iji tụnyere testosterone propionate vs cypionate, maka ịdị irè, ị nwere ike ịhọrọ propionate ebe ọ na-arụ ọrụ n'ime otu ụbọchị, mana ị ga-eji ọgwụ gị kwa ụbọchị.
Dịka ndị ọzọ steroid, testosterone propionate mepụtara na mmalite 1930s ma na-enyere aka melite ogo nke testosterone hormones na ahụ. Ọgwụ a na-ewu ewu n'ụwa nile n'etiti ndị na-ahụ maka ahụ iji gosipụta na ọ dị mkpa iji nyere ha aka iru ihe mgbaru ọsọ ha. Ruo ọtụtụ iri afọ ugbu a, ịchọrọ ịṅụ ọgwụ na-arị elu na-atụle uru ọ na-enye ndị ọrụ nke na-agụnye imelite uru uru nke testosterone dị ka akwara ụlọ. Ihe ndị nwoke na-ekwu na hormone na-enye bụ ihe ọzọ kpatara nnukwu ọchịchọ.
Testosterone Propionate Ọnụọgụ ọgwụ
Onye malitere na protosterone propionate na-achọ ka ị malite na obere dosages nke sitere na 50-100mgs ka a ga-inye ya mgbe 2-3 gasịrị. N'izu kwa izu nke testosterone propionate site na 200 gaa na 500mgs.
Ọgwụ ọjọọ nwere ike ịkpata nsogbu dị ukwuu maka ndị na-amalite ịlụ bụ ndị na-ebu oke doses maka oge mbụ. Dọkịta gị ga-enye gị usoro ọgwụgwọ kwesịrị ekwesị mgbe ị nyochachara ọnọdụ gị. Ị ga-enwe mmetụta nke testosterone propionate tupu na mgbe ewere ya. Cheta mgbe nile ịgbaso ntuziaka usoro onunu. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị naghị enwe obi iru ala ụbọchị, ịnwere ike ịga maka ọgwụ ahụ nke na-adịru otu ọnwa.
Testosterone Propionate Ọkara ndụ
Ihe omuma nke testosterone propionate nwere ọkara ndụ nke 24 awa mana gel na-adịnye nwere ndụ ndụ ruo oge 4. Dọkịta gị ga-emepụta oge kachasị mma nke usoro ọgwụgwọ ga-enyere gị aka nweta nsonaazụ ịchọrọ.
Mgbe a tọhapụrụ ọgwụ ahụ n'ahịa na 1930s. A nwalere ya ma gosipụta ya iji nyere aka mee ka ike ahụ dịkwuo mma nakwa iwuli elu ụlọ. Ọgwụ ahụ na-enye uru ahụ na nri kwesịrị ekwesị na-enyere ha aka ito na mgbe onye ọrụ na-eme mmemme kwesịrị ekwesị ga-ejide n'aka na ị ga-enweta ahụ dị mkpa na egwuregwu ahụ. Ọnụnọ nke hormones testosterone n'ime ahụ gị pụtara na ị ga-enwe ọtụtụ uru ma e wezụga uru ụlọ dị ka mmụba nke ọrụ nwoke gị dị ka mmụba olu na uto nke ntutu ihu n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Otú ọ dị, ịgakwuru dọkịta gị ga-abụ ụzọ kasị mma ị ga-esi nweta mmetụta testosterone propionate. Ntucha ma ọ bụ ọzịza gburugburu ebe ịgbawa ahụ bụ ihe dị mma, ma ọ ga-apụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị ma ọ bụrụ na mmetụta ahụ adịghị apụ, laghachikwute dọkịta gị ozugbo. Ịkekọrịta ọgwụ ahụ na ndị ọzọ na-emepụta ahụ pụrụ ịdị ize ndụ ebe ọ bụ na ị maghị otú ọgwụ ga-esi emeghachi ahụ gị. Nnyocha ahụike dị oke mkpa tupu ị nụ ụbụrụ testosterone propionate.
testosterone propionate uru
Na-enyere aka mgbu aka
Ọganihu nke ahụ ike
Ọkpụkpụ anụ ọkụ.
Sustanon 250 steroid bụ ọgwụ na-agba ọgwụ maka ndị ikom na-ata ahụhụ na mmepụta nke testosterone dị ala ma na-egbochi ha ọtụtụ uru. Sustanon 250 na-enye ndị ọrụ aka ịzụlite àgwà ụmụ nwoke ha chọrọ dịka ịmalite olu ha, na-ewusi ike mgbochi na ọbụna ntutu nke ntutu isi na ahụ ma ọ bụ ihu.
Sustanon 250 bụ steroid nke Organon Company guzobere na 1970s iji nyere ndị mmadụ aka ka ahụ ha ghara ịmịpụta hormones zuru ezu na testosterone. Ọgwụ ọjọọ a na-ewu ewu n'ime obere oge mgbe a tọhapụrụ ya n'ahịa ebe ọ bụ na ọ bụ ezigbo ngwọta nye ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu. A na-eme Sustanon 250 site na ijikọta 4 dị iche iche testosterone ester nke gụnyere, 30mg nke testosterone propionate, 60mg-testosterone phenylpropionate, 100mg-testosterone decanoate, na 60mg-isocaproate. Ihe mejupụtara na-eme ka ngwaahịa ahụ dị ike ma bụrụ ihe bara uru ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ahụ na ndị ọzọ na-ahụ maka nsogbu testosterone.
Otu esi agba Sustanon 250
A ghaghị inye ọgwụ ọgwụ a otu ugboro kwa izu ma ọ bụ mgbe ụbọchị 3 gafere ike ya nke na-enye ya aka ịrụ ọrụ na ahụ gị ruo ụbọchị ụfọdụ. Otú ọ dị, ụlọ ọrụ ụwa na-emegide mgbochi ọgwụ a machibidoro ọgwụ, ya mere, ọ bụghị ezigbo maka ndị na-eme egwuregwu. Ị nwere ike ịdọrọ ọgwụ na ahụ ike gị n'onwe gị ma ọ bụ mee ndokwa maka nleta mgbe niile n'ụlọ ọgwụ iji nweta ọgwụ ahụ site na dọkịta gị. Ọkara ndụ nke ọgwụ na-eme mgbanwe dị mma na-eme ka ọ dị mma maka ọtụtụ ndị ọkachamara ma na-ele anya mgbe niile iji zere mmetụta ndị ọzọ.
Sustanon 250 maka ozubu
N'izu, na-enweghị ụmonụ testosterone na ahụ gị, ọ ga-esi ike ị nweta oke ahụ ike ị chọrọ ka ọ bụrụ ozu. N'agbanyeghị nri ma ọ bụ mgbatị ị na-eme kwa ụbọchị, ị ghaghị inwe homonụ nwoke iji mee ka ọrụ gị dịkwuo mma. Ọgwụ ahụ na-arụ ọrụ site n'ịkpali ahụ gị iji mepụta estrogen karị, si otú a nweta ọkwa dị omimi nke testosterone. Sustanon 250 enyere aka iji dozie nsogbu niile nke testosterone dị ala na-agụnye ịmebe na ịkwagide ahụ ike.
Testosterone Sustanon 250 Ọnụọgụ ọgwụ
Sustanon 250 usoro ziri ezi maka bodybuilders kwesịrị site na 250mgs -1500mgs kwa izu. Otú ọ dị, 500-750mg bụ ihe a na-ahụkarị kwa izu. Ụfọdụ ndị nwere ike inwe obi iru ala na Sustanon 250 injections mgbe ụbọchị atọ gasịrị ma ịga maka izu izu ga-abụ nnukwu echiche.
Kedu ihe Sustanon 250 nwetara?
Ihe kachasị mma ị ga-enwe mgbe ị gwọchara ọgwụ a bụ testosterone mgbe nile ruo izu atọ mgbe ogwughasị. Nke pụtara na ị ga-enwe ike ahụ dị gị mkpa na ịzụ ahịa nwoke magburu onwe ya n'etiti ihe ndị ọzọ na-enweta testosterone. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-eji ọgwụ ahụ eme ogologo oge, ị ga-aga maka nyocha ọbara iji nyochaa ọkwa gị testosterone. Cheta ọkwa ogo ma ọ bụ nke na-ebu ibu nwere ike ịdị ize ndụ. Ihe ọzọ bara uru nke ị ga - enweta site n'iji ọgwụ a eme ihe bụ ịkwalite na ịkwagide ahụ ike.
Oge usoro Sustanon 250 na-agụnye àgwà ndị ọzọ ebe ọ bụ na ị pụghị inweta uru ahụ dị gị mkpa, site n'iji Sustanon nanị. Nke a bụ Sustanon bulking cycle;
izu Sustanon250 Dianabol Ostarine
1 500mgs / izu 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
2 500mgs / izu 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
3 500mgs / izu 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
4 500mgs / izu 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
5 500mgs / izu 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
6 500mgs / izu 40mgs / ed 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
7 500mgs / izu Gbanyụọ 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
8 500mgs / izu Gbanyụọ 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
9 500mgs / izu Gbanyụọ 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
10 500mgs / izu Gbanyụọ 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
11 500mgs / izu Gbanyụọ 25mgs / ed 25mgs / ed 7caps / ed 600mgs / izu
* ed pụtara ụbọchị ọ bụla / kwa ụbọchị
Nke a bụ ọgwụ na-eme ogologo oge nke na-abata ma ọ bụ capsule ma ọ bụ ụdị ogwu. Nhọrọ ahụ bụ nke gị mgbe niile, ma ụdị abụọ dị iche iche dị iche iche dị irè. Ọgwụ ọjọọ dị mma maka ndị nwere obere testosterone dị ala ma ọ bụ ahụ ha enweghị ike ịmepụta hormone dị ezigbo mkpa. Ihe omuma nke testosterone nwere ike inyere aka na mmepe nke njirimara nwoke dị ka ịmalite ịmalite olu, nkesa nke ọma na nkwonkwo akwara.
Testosterone undecanoate Ejiri Organon Drug Company nke 1980 mepụtara na XNUMX nke na-ebute ịnye ọgwụ ọgwụ nke na-adịghị agafe na imeju. Ọzọkwa, ọgwụ ahụ bụ echiche nke ịmepụta anabolic androgen steroid (AASraw) nke nwere ike inyere aka n'ịgwọ mmepụta nke testosterone dị ala na ụmụ nwoke. Otú ọ dị, iwebata ihe ndị ọzọ testosterone esters nke na-egosi na ha siri ike maka inye ihe, testosterone undecanoate ejiri nwayọọ nwayọọ na-efunahụ ọtụtụ ndị ọkachamara na ndị na-eme egwuregwu.
Kedu Testosterone undecanoate ọrụ
Ihe protosterone undecanoate na-aga site n'usoro lymphatic ma ọ bụghị imeju dịka ndị ọzọ steroid. Ya mere, ọgwụ ahụ abanye n'ime ọbara n'ebughị ụzọ mebie ma ọ bụ emetụta imeju nke pụtara na ị na-enwe mmetụta dị na ya. Usoro steroid nke na-abanye n'ime ahụ gị na-eme ka ọ dị iche na steroid ndị ọzọ na-atụ.
testosterone Undecanoate Na-arụ ọrụ n'ahụ
Testosterone hormone na-arụ ọrụ dị oké mkpa n'anụ ahụ maka ịhapụ abụba, inweta ike na maka ụlọ mgbu n'etiti ndị ọzọ. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-eji ọgwụ a eme ihe iji mee ka ahụ ike ha dịkwuo mma na imeziwanye ọrụ ha. Ọ bụ ezie na a na-ekwu testosterone undecanoate dị ka steroid na-adịghị ike, ọ nwere ike inwe nsonaazụ dị mma n'ahụ ụlọ na ahụike gị na-arụ mgbe ị na-eji usoro ihe oriri dị elu na-eri nri kwesịrị ekwesị.
Otú ọ dị, ndị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe n'ụzọ ziri ezi ga-enwe mmetụta ndị nwere ike ịgwọta ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ dọkịta gị na oge. Testosterone undecanoate bodybuilding nwere ike ịba mma ma ọ bụrụ na ịga maka testosterone undecanoate ogwu nke i nwere ike iburu na 10 ma ọ bụ 14 izu. Dabere na ọnọdụ gị, dọkịta ahụ ga-emepụta usoro ọgwụgwọ na usoro ziri ezi nke testosterone undecanoate maka gị. Mkpụrụ ndụ capsules nke testosterone undecanoate ọkara ndụ na-agba ọsọ maka otu ụbọchị, ị ga-ejikwa ọgwụ gị kwa ụbọchị.
testosterone Undecanoate uru
Ụfọdụ n'ime ihe ndị bụ isi na-agụnye na-agụnye undecanoate gụnyere;
Gbanwee oke abụba
Mee ka ọnọdụ dịkwuo elu
Mee ka obi sie gị ike
Mee ka ị na-eme ka ị na-enwe mmekọahụ
Meziwanye uru ahụ
testosterone Undecanoate Ngwunye
Maka bodybuilders ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu ndị na-egosi testosterone undecanoate gburugburu 480mg kwa ụbọchị. Otú ọ dị, maka ndị ọrụ oge mbụ, dọkịta nwere ike belata doses wee welie ya na oge. Mgbe ị kpebiri na ikpokọta ọgwụ ahụ na ndị ọzọ steroid, 200-250mgs ga-adị mma. A ghaghị ịṅụ ọgwụ ahụ tupu nri nke tupu tupu nri ụtụtụ na nke mgbede tupu nri abalị.
Ị nwere ike iji steroid a n'akụkụ ndị ọzọ dị ka deca Durabolin, trenbolone na promobolan. Ọ bụrụ na ị kpebie iji orall na-eme ihe ndị ọzọ, mgbe ahụ ọ na-atụ aro ka ị jiri ya na obere doses dị ka 240mg kwa ụbọchị. Ndị na-eme ka ndị na-eme ihe nkiri ahụ ga-abụ ebe nyocha ma nye oral ndị ọzọ ohere iji rụọ ọrụ nke ọma n'enweghị mmetụta ọ bụla ọzọ.
izu Andriol Nkwado Aromasin Cardarine N2Guard
1 250mg / ED 600mgs / izu 10mgs 20mgs / ED 5caps / ED
2 250mgs / ED 600mgs / izu 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
3 250mgs / ED 600mgs / izu 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
4 250mgs / ED 600mgs / izu 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
5 250mgs / ED 600mgs / izu 10mgs / EOD 20mgs / ED 5caps / ED
* ED pụtara kwa ụbọchị ma ọ bụ kwa ụbọchị
Nke a bụ ọgwụ anabolic nke e mere na 1961 na East Germany site n'aka ụlọ ọrụ Jenapharm ọgwụ maka ịgwọ ọrịa nke ọkpụkpụ. Ọgwụ a na-enweta ọgwụ ọjọọ mgbe e kwuchara na ndị Olympia East German ga-enwe ọganihu na 1960s na 1980s. Ndị na-eme egwuregwu na ndị bodybuilders na-eji turinabol ugbu a iji meziwanye ahụ ha na akwara ha na ike ha chọrọ ịkwọ ụgbọala ha n'oge niile ha na-eme. Maka bodybuilders, ị ga-enwe ike ịchọta ihe ị na-agaghị emeli ma ọ bụrụ na iji ọgwụ ahụ eme ihe n'ụzọ ziri ezi.
Kedu Turinabol ọrụ
Ngwongwo turinabol dị naanị maka ederede capsule ọnụ. Ugbu a, ọ dịghị ụdị injectable maka steroid a. Enweghị NKWUKWU maka ire ere, na ọgwụ dị naanị na labs. Achọ maka ọgwụ ahụ na-arị elu n'ịtụle nsogbu turinabol ọ na-enye ndị ọrụ. A maara ọgwụ a maka ịdị irè iji meziwanye njikọ protein muscle, meziwanye ọnụ ọgụgụ nke nitrogen absorption na uru ahụ nakwa ịba ụba mkpụrụ ndụ ọbara uhie. Mgbanwe turinabol na-adabere na mkpa gị, ma ị nwere ike iji 50mg kwa ụbọchị ma ọ bụ izu abụọ. Otú ọ dị, dọkịta gị nwere ike ịmepụtara gị usoro kachasị mma maka usoro izu ike gị.
Turinabol (Tbol) na-eguzo dị ka steroid kasị mma maka ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na ndị na-eme egwuregwu na-arụpụta uru dị ukwuu n'ịgbalite ume ike na nkwalite ahụ ike. Na-etinye ọgwụ ahụ na nri kwesịrị ekwesị na mmega kwesịrị ekwesị ị ga-ejide n'aka na ị nweta nsonaazụ ndị a chọrọ. The steroid na-enye ahụ gị na ndị na-edozi ahụ dị mkpa ga-eme ka ahụ ike na-eto eto ma ọkụ ahụ abụba. Iji ọgwụ a eme ihe, ị gaghị echegbu onwe gị banyere mmetụta nke estrogenic dị ka ụra nke ọma, njigide mmiri, na ọbara mgbali elu. Ya mere, ndị na-enwe mmetụta dị egwu ga-adị mma na ọgwụ a.
Ụfọdụ n'ime Turinabol uru ị ga-enweta site na iji ọgwụ a gụnyere;
Nwee utịp ma enweghi ibu
Ogologo nsogbu nke mmetụta dị ala
Meziwanye mmepụta nke sitere na hormone testosterone
Ngwunye Turinabol a na-atụ aro maka ụmụ nwoke bụ 20 ka 50gms kwa ụbọchị, ị nwere ike iji ya na nkume ndị ọzọ maka nsonaazụ kacha mma. Enwere echiche na-ezighị ezi na, dịka onye na-arụ ọrụ ozuzu, ị ga-eji nnukwu onyonyo iji nweta nsonaazụ. Ndi nwanyi kwesiri iwepu 2.5 obere umu turinabol na 7.5mgs kwa ubochi ebe ihe di elu nwere ike iduga umu nwanyi.
Turinabol Ọkara ndụ
Turinabol (Tbol) nwere ọkara ndụ nke 16 awa. Ya mere, ị ga-eji usoro ọgwụgwọ gị otu ugboro kwa ụbọchị - Otú ọ dị, ụfọdụ bodybuilders dị ka ịkewaa usoro ọgwụgwọ ahụ n'ime oge abụọ 12 nke dịkwa mma ịnọgide na-enwe ọkwa ọbara dị mma.
A pụrụ iji steroid a jikọta ya na oral ndị ọzọ dịka Dbol, N2Guard, na Cardarine maka nsonaazụ kachasị mma na iji belata mmetụta ndị ọzọ.
izu Tbol Dbol N2Guard Cardarine
* ED na-eguzo kwa ụbọchị.
Kedu nke testosterone ester ziri ezi maka gị?
Ugbu a na ị nwere nhụwa nke kachasị testosterone esters dị na ahịa, ihe ịma aka a na-abịa ugbu a n'ịchọpụta ihe ziri ezi maka gị. Ndị mmadụ na-eme mgbanwe dịgasị iche iche na ọgwụ dịgasị iche iche, ihe nwere ike ịdị na-arụ ọrụ maka enyi gị nwere ike ọ gaghị ezu oke maka gị. Ndị mmadụ nwere ụdị ngwongwo dị iche iche, ezigbo dọkịta ga-enyocha ọnọdụ gị mgbe niile tupu ị họrọ ọgwụ ziri ezi.
Ọrịa ụbụrụ testosterone dị mkpa chọrọ ọgwụgwọ n'otu n'otu iji nweta nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gaa n'echiche nke ndị mmadụ, ụfọdụ ga-agwa gị na acetate kachasị mma, ndị ọzọ ga-eziga gị ịzụta cypionate ma ọ bụ ọbụna na-ezighi ezi. Ụzọ kachasị mma ịhọrọ ezi testosterone esters bụ ịhụ dọkịta ma kọwaa nsogbu gị mgbe ahụ ọ ga-ekwupụta ọgwụ ọjọọ.
Kedu ndụmọdụ maka ịhọrọ ezigbo testosterone esters maka gị?
Nrọ nke onye ọ bụla na-arụ ọrụ bụ inwe ọdịdị ọdịdị ahụ dị mma, ahụike zuru ezu ahụ, na akwara ike. Otú ọ dị, ụfọdụ ọnọdụ ndị dị ka mmepụta nke testosterone dị ala nwere ike ịgọnahụ gị ohere ịnweta ọganihu gị.
Otutu n'ime bodybuilders na - eji ester testosterone nweta akwara ha choro mgbe ha na - eme ihe omumu. Dịka, ahụ gị adịghị enwe testosterone zuru ezu iji wuo ahụ ike gị ma nye gị ike dị gị mkpa dị ka onye na-arụ ọrụ ozuzu. Ihe ị ga - achọ iji bulie ha dị mma.
Ya mere, olee otu i si ahọrọ ezi testosterone ziri ezi?
Ka ọ dị ugbu a, ahịa jupụtara n'ụdị testosterone dị iche iche nke nwere ike ime ka ọ siere gị ike ịhọrọ nke kacha mma. All brands na-azọrọ na ọ bụ ihe kachasị mma ma nye ngwọta maka nsogbu gị. Otú ọ dị, ọ dị mkpa ka ị kpachara anya ka ịchọrọ enyemaka site na ọkachamara ahụ ike. Tụlee ndụmọdụ ndị na-esonụ mgbe ị na-ahọrọ ezi testosterone boosters;
1. Ghọta ihe ị chọrọ
Tupu ị gaa dọkịta gị maka ndụmọdụ, buru ụzọ ghọta nsogbu gị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nsogbu gị enweghi ike ị nweta uru ahụ dị mkpa ma ọ bụ ọbụna ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ anụ ahụ gị nke ga-eme ka dọkịta gị dị mfe ịchọpụta ọgwụ kacha mma maka gị. Ihe ndị esters testosterone nwere ihe dị iche iche iji dozie otu nsogbu. Ndị ọzọ bụ ndị zuru okè maka ndị mmadụ na-aṅụ ọgwụ maka ọrịa dịgasị iche iche ebe ndị ọzọ agaghị eji ọgwụ ndị ọzọ eme ihe. Ejila ụzọ ịzụta ọgwụ si na ụlọ ahịa gị kachasị nso na-enweghị nduzi ọkachamara ahụ ike. Ị ga-etinye ndụ gị n'ihe ize ndụ ebe ị nwere ike ịnweta mmetụta ndị nwere ike ime ka ahụike gị dịkwuo mma.
2. Ụdị nke esters nke testosterone
The testosterone ndị na-enye ume na-abịa n'ụdị dịgasị iche iche ụfọdụ bụ ndị e kere eke na ndị ọzọ bụ ọgwụ ọgwụ. Dọkịta gị ga-anọ n'ọnọdụ dị mma iji chọpụta ụdị kacha mma maka gị mgbe ị nyochachara ahụike gị. Ahụ gị dị ezigbo mkpa mgbe ị na-aṅụ ọgwụ ọjọọ; ahụ gị anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọzọ dabere na mkpa gị, onye dọkịta ga - ama ụdị dị mma iji nyere gị aka iru ihe mgbaru ọsọ gị.
3. Ogo na irè
The testosterone ester na-arụ ọrụ otu ụzọ, ma ọdịiche na-abịa ha irè. Ụdị dị iche iche nwere ndụ dị iche, ọ dị mkpa ịṅụ ọgwụ ụfọdụ n'otu izu n'izu ọzọ na 2 ma ọ bụ 3 ụbọchị. Mkpa gị ga - eduzi dọkịta gị ugbu a na ịhọrọ ntuziaka na - egbuke egbuke maka gị. Ọ bụrụ na ị naghị enwe nsogbu na estto testosterone, ị nwere ike ịgwa dọkịta gị ka ọ chọọ ọgwụ ọgwụ ọnụ.
Ọnụ kachasị mkpa mgbe ị na-ahọrọ ma ọ bụ na-eji ụbụrụ testosterone bụ iji tinye aka na dọkịta gị n'ọnọdụ ọ bụla. Ịnagide mmetụta ndị dị na ya nwere ike ibu ọnụ ma mgbe ụfọdụ ịnwere ike ghara ịgbanwe ọnọdụ ahụ. Enwetala ego ahụ mgbe ị na-ahọrọ ezigbo testosterone esters ebe ọ bụ na ọ ga-ekwe omume ịnweta ngwaahịa dị ala ma ọ bụrụ na ị gaa maka ngwaahịa kachasị ọnụ ala. Otú ọ dị, adịghịkwa emebi akụ gị maka ọgwụ ọjọọ, tụlee irè na ogo nke nsonaazụ ndị ị na-atụ anya ya.
Dudley, RE, & Constantinides, PP (2018). Ihe Ntuziaka Patent S. 15 / 723,985.
Guercia, C, Cianciullo, P., & Porte, C. (2017). Nyocha nke testosterone fatty acid esters na gland digestive nke mọsel site chromatography mmiri mmiri-elu mkpebi uka spectrometry. Ndị steroid, 123, 67-72.
Chen, FJ, Patel, MV, Fikstad, DT, Zhang, H., & Gillyar, C. (2018). Ihe Ntuziaka Patent S. 15 / 714,541.
Ihe 10 ị ga-ama tupu gị ewere DMAA	Ihe niile I Kwesịrị Ịmara Banyere Dianabol Powder Maka Sale